…अर्को बोक्सोले हैरान पार्यो ! — Nepal Sarokar
Posted on January 6, 2017 by Nepal Sarokar
रातो नम्बरबाट फोन आउँछ र त्यो फोन उठायो भने मरिन्छ “ भन्ने हल्ला फैलाउनेहरु र त्यही हल्लालाई पत्याएर डराउनेहरु रहेको हाम्रो समाजमा,वर्षौँदेखि जरा गाडेर बसेको अन्धविश्वासको जरो उखेल्न किन सजिलो होस् र ? केही समय अगाडि काभ्रे सानो वाङ्थलीकी लक्ष्मी परियारको यस्तै अन्धविश्वासको कारण ज्यान गयो । अन्धविश्वास –“बोक्सी“ ।
म सम्झिन्छु, गाउँमा एकजनाले गर्वका साथ एउटा घटना सुनाउँथे ,“ त्यो बूढीले मेरो छोरोलाई बिरामी बनाएर हैरान पारी । त्यहिभएर, एकदिन साँझपख त्यो बजारबाट फर्किंदै गर्दा, बाटो छेकेर, हातमा चिर्पट लिएर, मेरो छोरोलाई बिरामी बनाउछेस् ? अब बनाइस् भने तँलाई मार्दिन्छु भनेँ । त्यसपछि त बूढीले, केही गर्दिन अबदेखि बाबु भनी । काम्दै डरले पिसाब नै छोडी । त्यो दिनदेखि छोरो सन्चो भयो तर अलिदिनपछि फेरि अर्को बोक्सोले हैरान पार्यो । “
साँझको समय, बूढो शरीर, एक्लो हिँडाई, कसैले एकान्तमा बाटो छेकेर मार्ने धम्की दिँदा , उसको हालत के हुन्छ होला ? उनको त्यो स्वीकारोक्ति थियो कि डर ?
साँच्चै नै , बोक्सी बिद्या हुन्थ्यो र त्यसले कसैलाई मास्न सकिन्थ्यो भने समाजका ती व्यक्तिहरुले त्यो विद्या सिक्ने थिए । जसलाई समाजमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउनुछ ।
काभ्रेकी लक्ष्मी परियारलाई बोक्सीको आरोपमा कुटपिट गर्ने, अमानवीय व्यवहार गर्ने हिरा लामाको शैक्षिक योग्यता, उनको “शैक्षिक प्रमाणपत्र“ र “ शिक्षक पद“ ले निर्णय गर्ने हो त ? “सामाजिक न्याय भनेको के हो?“ “कानून भनेको के हो“ जस्ता प्रश्नहरुको कस्ता उत्तरहरुलाई मान्यता दिएर ती सामाजिक विषयका शिक्षकले आफ्ना विद्यार्थी उत्तिर्ण गराए होलान् ?
के शिक्षक हुनुको उनको ज्ञान र कर्तव्य भनेको, विद्यार्थीलाई पाठ रटाउनु मात्र हो ? शिक्षक भनेका त समाजका अगुवा हुन् । यो घटनाले शिक्षा प्रणालीलाई नै चुनौती दिएको छ ।
अर्कोतर्फ,आमालाई आफ्नै शिक्षकले गरेको प्रत्येक तुच्छ व्यवहारको साक्षी बनेको त्यो बालकको मनोदशा । उसले आफ्नो समाजलाई हेर्ने दृष्टिकोण, शिक्षक र शिक्षाप्रतिको आदर कस्तो भयो र हुनेछ ? कुनै दिन उसमा बदलाको भाव आयो भने ? बालकलाई सहि मार्गनिर्देशन भयो भने, त्यही बदलाको भावले ऊ समाज रुपान्तरणमा जान सक्छ तर आमाको स्नेहबाट खोसिएको उसलाई गतिलो मार्गनिर्देशन भएन भने समाजलाई घृणा गर्नेछ र कालान्तरमा नकारात्मक ऊर्जा लिएर ननिस्केला भन्न सकिन्न ।
लक्ष्मी परियार, दलित वर्ग, विपन्न महिला । सुन्दै, देख्दै आएका घटनाहरुमा, बोक्सी जहिल्यै एक्लो व्यक्ति , कमजोर, विपन्न वा पिछडिएको वर्ग हुने गर्दछ । बोक्सीको आरोपमा उही पर्छ जो सामाजिक संरचनामा थिचोमिचोमा परेको छ ।
कुटपिट, हत्या आदि घटना घटिसकेपछि मात्र यी घटना बाहिर आउँछन् । तर समाजमा कैयौं यस्ता कथित “बोक्सीहरु“ छन् , जो आवाज उठाएर आए भने, लाखौं मानहानी मुद्दाहरु उब्जन सक्छन् । बोक्सी प्रथालाई धामी झाँक्रीले बढावा दिएका छन् । अझ भनौं संरक्षक नै भएर उभिएका छन् । बोक्सी कुप्रथाको अन्त्यको लागि , धामी झाँक्री जस्ता अन्धविश्वास हटाउनु जरुरी छ ।
सुन्दै, देख्दै आएका घटनाहरुमा, बोक्सी जहिल्यै एक्लो व्यक्ति , कमजोर, विपन्न वा पिछडिएको वर्ग हुने गर्दछ । बोक्सीको आरोपमा उही पर्छ जो सामाजिक संरचनामा थिचोमिचोमा परेको छ ।
शिक्षित र ठूलो वर्गका भनेका मनिसहरुबाट नै यी घटनाहरु घटाइन्छन् । त्यसैले पहिले शिक्षित भनिनेहरुलाई नै विभिन्न कार्यक्रमहरुमा संलग्न गराई उनिहरुकै अगुवाईमा चेतना फैलाउनु जरुरी छ ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, कुनै पनि कुप्रथा र अन्धविश्वास, नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण नहोस् भनेर सजग रहनु जरुरी छ । ताकि उनिहरुलाई यी घटनाहरु अपत्यारिला कथा जस्तै लागुन् ।